Fanodinkodinam-bolam-panjakana :: Raikitra ny fanenjehana minisitra telo teo aloha eny amin’ny HCJ • AoRaha
Fanodinkodinam-bolam-panjakana Raikitra ny fanenjehana minisitra telo teo aloha eny amin’ny HCJ
Mety ho fisantarana ny tena fanenjehana an’ireo olom-panjakana ambony, izay nandika lalàna teto amin’ny firenena. Nanolotra antontan-taratasy mikasika fanodinkodinam-bolam-panjakana miisa telo, any amin’ny Fitsarana olona ambony (HCJ), ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco). Minisitra telo teo aloha no voarohirohy amin’ireto raharaha ireto, araka ny fantatra avy amina loharanom-baovao iray. Volam-panjakana an’arivony tapitrisa ariary no voalaza fa very an-javony.
“Fandoavam-bola tsy mazava nataona orinasa lehibe miisa dimy tao amin’ny kaontim-bola manokan’ny minisitry ny Asa vaventy teo aloha, ny raharaha voalohany. Fitonjato tapitrisa ariary ny sandan’io vola io. Nanao fanadihadiana lalina mikasika ny raharaha avy hatrany ny Bianco, vantany vao nahafantatra ny fisiana fahaverezam-bola tsy mazava. Raha ny siosion-dresaka heno dia fantatra fa tsy eto Madagasikara ity minisitra teo aloha ity, amin’izao fotoana izao”, hoy itsy loharanam-baovao voalaza tetsy ambony itsy.
Nivoaka ihany koa fa: “minisitry ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra teo aloha no voasaringotra amin’ny raharaha faharoa, taorian’ny fanodinkodinana vola mitentina dimy arivo tapitrisa ariary mahery. Ny vola tokony hividianana fitaovana informatika sy ireo kojakoja miaraka aminy no tsy hita.
Tsiahivina fa efa niteraka resa-be teto amin’ny firenena io raharaha io noho ny maha saropady azy sy ny antsoantsoan’ireo olom-pirenena sasany fa tsy azo ekena ny fisian’ny tsy maty manota eto amin’ny tany sy ny fanjakana.
Vola lany, entana tsy misy
Mitovy amin’iry raharaha faharoa tetsy ambony tetsy ihany ny fahatelo farany. Voalaza fa tao amin’ny minisiteran’ny Mponina no nitranga ny fampiasam-bola mitentina arivo tapitrisa ariary nefa tsy nandeha tamin’ny tokony ho izy akory. Araka ny fanampim-baovao, dia tokony ho nividianana kojakoja fampiasa ao anaty birao io vola io. Nisy fanadihadiana natao ka nahitana fa lany nefa tsy nisy entana azo akory ny tolo-bidy nalefan’ilay minisitra.
An-taonany no nanadihadiana lalina an’ireto raharaha telo ireto. Nalefa avy hatrany any amin’ny HCJ ny valin’ny famotorana. Tsiahivina fa herintaona izao no nijoroan’io rafi-pitsarana natokana ho an’ireo olona ambony nitazona andraikitra ambony teto amin’ny firenena io.
Fanabeazana maha olom-pirenena :: Hiparitaka any amin’ny faritra misy azy ireo masoivoho ECM
Fiaraha-miasa ARTEC sy INSTAT :: Hohavaozina ireo antontan’isa mikasika ny fifandraisan-davitra